NextMapping | Ongororo Inoti! Zvinoda Vashandi Kana Vadzokera KuOffice
Ongororo Inoti! Zvinoda Vashandi Kana Vadzokera KuOffice
At NextMping isu takatumira ongororo June 2021 kune vedu tsamba tsamba vanyoreri tichivabvunza ivo zvavanonzwa nezve nzvimbo yakasanganiswa yebasa uye zvavanoda pavanodzoka kuhofisi.
Ongororo iyi yakatumirwa pasati pave nekuwedzera kwazvino kweiyo COVID Delta musiyano uye apo mabhizinesi mazhinji anga achironga kudzokera kune zvakajairika muKudonha.
Pamusoro peongororo yatakatumira ndanga ndichitaura nevatengi uye ndanzwa kubva kuvatungamiriri vazhinji nenhengo dzechikwata kuti ruzhinji harudi kudzoserwa kuhofisi.
Mibvunzo nemhinduro kuongororo ndeinotevera:
Q1. Iwe unonzwa sei nezve mamwe makambani anoronga kuraira vashandi vese kudzokera kuhofisi muKudonha?
Mhinduro dzekuongorora: 12% yevakabvunzwa vanobvumirana nekuraira vashandi kudzokera kuhofisi
40% yevakabvunzwa havabvumirane nekuraira vashandi kudzokera kuhofisi
40% yevakabvunzwa vakataura kuti kana vashandi vakarairwa kudzokera kuhofisi vanhu vanobva
Q2. Kana iwe ukapihwa sarudzo sei iwe waizoda kushanda munzvimbo yakasanganiswa chii chaungasarudza?
9.09% yevakapindura vakati vanoda kushanda muhofisi nguva yakazara
36.36% yevakapindura vakataura kuti vangasarudza kushanda zvakanyanya kure
54.55% yevakabvunzwa vakataura kuti vangasarudza kushandira kure kwemazuva maviri pavhiki
Q3. Ndezvipi zviwanikwa zvaungade kuti kambani yako ipe kuitira kuti ugone kushanda nepaunogona napo musanganiswa webasa?
36.36% yevakabvunzwa vakati zvakavanzika zve data kuitira kuti vakwanise kuwana zvese zvekushandisa zvakachengeteka
9.09% yevakapindura vakati malaptop matsva kuitira kuti vakwanise kushanda kubva chero kupi (hofisi / kumba)
9.09% yevakapindura vakati ergonomic yakagadzirirwa hofisi yavo yekumba kuti igare zvakanaka
45.45% yakati vaizoda 'zvese zviri pamusoro'
Nguva ichiripo yekuti iwe govana zvaunofunga - ndinotarisira kuona kwako.